iPhone 7 inomhanya Ubuntu nekutenda nebasa remugadziri uyu | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi kune mafoni uye mahwendefa akagadzirirwa kushanda kunyanya neLinux. Inonyanya kufarirwa ndeaya ePINE64, uye masisitimu akanyanya kushandiswa (ari mashoma) Ubuntu Kubata, Mobian uye Arch Linux, iyo Manjaro yakawedzerwawo, asi iyo yekupedzisira iri kutarisa zvakanyanya pamafoni. Kushandisa shoma Linux pane nhare zvakanaka, asi hazvingafadze here kugona kumhanyisa desktop desktop? Zvakanaka zvinoita sekunge zvinogoneka, uye kunyangwe a iPhone 7 Iwe unogona kuzviita.
Izvi zvakaratidzirwa nemushandisi anonzi newhacker1746 paReddit, uyo angangonzi anonzi Daniel Rodríguez kana tikateerera zita rinoonekwa mumavhidhiyo eYouTube. Asi kana iwe uri kufunga kuti icho chinhu chiri nyore mukati mekusvikwa nechero ani, kanganwa icho. Muchokwadi, Rodríguez akafunga kutora nhanho nekuti yake iPhone 7 yakanga isisashande nekuda kwedambudziko mukuchengetedza kwayo ndangariro. Ipapo ndipo paakafunga kuyedza imwe sisitimu yekushandisa, uye uya akasarudzwa aive Ubuntu 20.04.
1 Ubuntu 20.04 pane iPhone 7: zvinogoneka, asi chete kune nyanzvi
2 Izvi zvinopa tariro yangu
Ubuntu 20.04 pane iPhone 7: zvinogoneka, asi chete kune nyanzvi
Chinhu chekutanga kuchengeta mupfungwa ndechekuti iyo iPhone 7, uye ini ndinofungidzira kuti yayo Plus vhezheni inoenderanawo (haina kuzvitaura), iwe unofanirwa kuita kuti jailbreak iitwe game Checkra1n. Kubva ipapo, matanho acho akatsanangurwa mukati Iyi link kubva kuReddit. Kana zviri zvekuvhiyiwa zvakambomiswa, unogona kuzviona muvhidhiyo inotevera:
Ini pachangu, kubva paiyo yapfuura vhidhiyo ini ndakashamisika neiyo kuita kwakanaka. Uye ini ndine PineTab uye iyo Kubata vhezheni yeUbuntu inononoka, zvekuti ndanyadziswa. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, izvozvi haugone kushandisa maapplication kubva kumahofisi epamutemo, akadai seFirefox, saka sisitimu yacho inogumira Izvo hazvisi izvo zvatinoona muiyo yapfuura vhidhiyo.
Mushure memaminetsi 1:30, Daniel anopinda muUbuntu desktop. Unomuona "achirwa" zvishoma nemahwindo, asi imhaka yekuti, zvirinani mumavhidhiyo akaburitswa, iyo interface inogara yakatwasuka (Iyo yemusoro wemusoro ndeye montage zvekuti inotaridzika zvakanaka uye inokodzera mukugadzirwa kweiyo blog). Kunyangwe zvakadaro, isu tinogona kufamba neFirefox, uye mavhidhiyo anotaridzika zvirinani pane paPineTab uye fluidity zvakare inoita kunge iri nani, isu tinokwanisa kupinda muchigadziro chekushandisa uye zvakakwana, tinogona kusimudza nekudzikisa kupenya uye LibreOffice inozadza iyo skrini yese, chimwe chinhu chandinoziva kuti vaive nenguva yakaoma kuwana vanogadzira Mobian / Arch Linux nePhosh interface.
Izvi zvinopa tariro yangu
Sezvandambotaura, ndakave nePineTab kubva munaGunyana. Ini ndinoziva zvakakwana kuti ndine chinyorwa cheEkutanga Adopter uye kuti hazvisi zvese zvaizove zvakakwana, asi ini ndinofunga pane basa rakawandisa kuti riitwe nhasi kuve neruzivo rwepakati. Asi chokwadi ndechekuti budiriro iri kuuya Uye, mumusoro mangu, ndinoona ramangwana mune iyo Linux pane nharembozha uye mapiritsi ichave sarudzo, uye yakanaka.
Ona izvo zvakaiswa Ubuntu 20.04 pane mudziyo senge iPhone 7 zvinoita kuti ndifunge kuti zvese zvinogoneka, uye zvinondichengeta mune rangu zano rekuti, kana vagadziri vakasakanda mapfumo pasi, Linux ine zvakawanda zvekutaura pane nhare mbozha zvakare. Unogona here kufungidzira uchishandisa Ubuntu Desktop pane foni uye Android kunyorera, senge WhatsApp, nekuda kweAnbox? Ini ndinoita, uye ini ndinorota nezvazvo, kunyangwe kana Mark Shuttleworth akasiya musi wake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ivo vanokwanisa kuisa Ubuntu pane yakavharirwa iPhone 7, uye zvinoita kunge zvinoshanda zvakanaka